दाङका बस : नाम मात्रैको एसी र डिलक्स « Postpati – News For All
दाङका बस : नाम मात्रैको एसी र डिलक्स
बिमलराज डाँगी । पछिल्नो समय दाङ लगाएत नेपालभर नै नयाँ यातायात प्रालिहरु थपिदै गइरहेका छन । नयाँ प्रालि थपीदै जाँदा हामीहरु आंकलन गर्न सक्छौ, नयाँ प्रालिहरुमा नयाँ सुविधा सम्पन्न बसहरु आउछन् । त्यसपछि यात्रुहरुलाई यात्रा गर्न सहज हुन्छ । यात्रुहरुले खोजे जस्तै सेवा पाउछन् ।
समयको माग सगै यात्रुको चापले गर्दा बसहरु थप्न आवश्यक छ । हामी सबैले मुल्याङन गर्न सक्छौ, यात्रुको माग अनुसार यात्रुहरुको सेवाको लागी केही वर्ष यता ५ नं प्रदेशको दाङ जिल्लामा करिब दर्जन बढी यातायात प्रालिहरु दर्ता भएर विभिन्न शहरहरुमा बसहरु सन्चालनमा आएका छन् ।
सन्चालनमा आउनु मात्र ठुलो कुरा रहेन यात्रुलाई कतिको भर पर्दो सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा विशेष रहन्छ ।
नयाँ प्रालि आउदा धेरैको चासोको विषय बन्छ । यो नयाँ प्रालीले चाही यात्रुलाई राम्रो र भरपर्दो सेवा सुबिधा दिनसक्छ या सक्दैन । त्यसै अनुसार भखरै स्थापना भएर आउदा प्रालीका मालीकहरु भनौ वा गाडीहरुका मालीकहरुले भनौ ! उनिहरु सबैले के के नै गर्छ जस्तो गरेर, हामीले अरुभन्दा उच्च स्तरीय सेवा दिन्छौ, भन्दै प्रचार बाजी गर्दै हिड्छन ।
सेवा सुरु गरेको केही महिना सम्म त राम्रै सेवा दिन्छन् । यात्रुहरु पनि राम्रै सेवा पाउछन । उसो त जो कोही यात्रुको पनि रहर हुन्छ ‘नया बसमा चढ्न’ । त्यसैले होला नया प्रालीका नया बसहरुमा सुरुका केही महिना त टिकट नै पाउन धौधौ पर्छ ।
कम्पनि अनुसार यात्राको बेला हामीहरु खाना, पानी, बसमा मज्जाले नेट चलाउनको लागी वाईफाई फ्री, सुन्न र हेर्नको लागी अडियो भिडियोको व्याबस्था यति त सबैले भन्ने नै गर्छन तर, त्यती मात्र हैन, ‘चिसो तातो जुन आबश्यक पर्छ, त्यसैको व्यबस्था छ’ भनेर यात्रुलाई भन्ने गरिन्छ । यदि तपाई गाडीमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइलाई दिसा, पिसाब गर्न मन लाग्यो भने तपाईले चालकलाइ गाडि रोक्न लगाएर बाटोमा सौचालय खोजिरहनु पर्दैन । शौचालय सहित को गाडीको व्यवस्था छ भनेर हल्ला हामीले प्रसस्थै सुन्ने गरेका थियौ ।
के सबै प्रालीहरुले आफुहरुले भनेजस्तो सेवा दिइरहेका छन त ?
सुनेको, देखेको र भोगेको पिडा !
दाङमा धेरै यातायात प्राली छन तर भरपर्दो सेवा दिनै कमी नै भेटिन्छन् । टिकट लिन जादा यात्रुलाइ हाम्रोमा आउनुहोस सिट राम्रो पाइन्छ, के चिन्ता गरेको हिटर खोजे हिटर छ, कुलर खोजे कुलर छ, मज्जाले आरामदायी सिट छ, वाइफाई फ्री छ, त्यो भन्दा के चाहियो ? आउनु्होस सिट मिलाएर टिकट काटदिन्छौ भन्दै तानेर लिन्छन ।
“दाङ देखि काठमाडौं सम्मको रु. १२०० हो टिकट दर तर तपाइलाई रु २०० छुट भयो भन्दै रु १००० मा काउन्टरमा बसेका एक कर्मचारीले टिकट काटिदिए, दाङ देखि काठमाडौं सम्मको रोल्पाका एक व्यक्तिले भने”, मैले सोचे गाडी बाहीरबाट त नया जस्तै देखिन्छ, अनि गाडीको चारै तिर ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ एसी, वाइफाई फ्री, कुलर, हिटर अनि अडियो भिडियो लेखेको प्रस्ट देखीन्छ । मनमा सोचीरहेको छु, आज पहिलो पटक यति सुविधा सम्पन्न गाडीमा यात्रा गर्दैछु । आजको यात्रा राम्रो हुने भयो, उनले भने करिब ५.३० बज्नै आटेको थियो । दाङबाट गाडीको यात्रा अघि बढ्छ, काठमाडौं तर्फ ।
केही किलोमिटर पारगरी दाङको नारायणपुर पुग्नै लाग्दा गाडी स्टापलाई वाईफाइ पासवर्ड मागे तर स्टाफले वाइफाईमा समस्या छ भनेर उत्तर दिए…! अनी म केही नबोली बसे ।
पुष माघको समय छ । रात छिपिदै गइरहेको चिसोले च्याप्दै जान्छ तर गाडी स्टाफले हिटर वाला गाडीमा हिटर नै चलाउदैनन त्यसपछि यात्रुहरु धेरै कराउछन, गाडी स्टाप चुपलागेर बस्छन । धेरै पछि उत्तर आउछ स्टापबाट हिटर चल्दैन, हिटरमा समस्या छ । अघि टिकट काटदा सबै सेवा छ भन्थे खै हामी गाडी चढीसकेपछि सबै बिग्रेछ क्यारे.., हास्दै उनले भने नामको मात्रै प्राली रहेछ तर सेवा सुविधाको लागी रहेनछ ।
यो पिढा एक जना व्यक्तिको मात्र हैन यस्ता पिढा भोगेका हजारै यात्रुहरु छन । त्यस्तै हजारौ यात्रुहरु पिढा भोग्नेमा एक व्यक्ति म पनि परेको छु ।
सुनेको र देखेको भन्दा अलि बेग्लै महसुस गरेको छु । मलै हुन त नेपाल त्यसै पछि परेको हैन, सबैले भन्छन । जुन हुदै नभको कुराहरुलाइ आश्वासन दिएर किन घात गर्नु ।
शनिबार दाङ देखी काठमाडौं सम्मको यात्रा गर्ने अवसर मिल्यो, जाँदा मोटरसाइकलको यात्रा थियो भने फर्कदा गाडिमा फर्कनु पर्ने भयो र म टिकट काट्नको लागी दिउसो करिब २ बजे तिर दाङ तुलसीपुर बसपार्क पुगे । म टिकट काउन्टर पुग्न बितिकै धेरै मान्छेहरु मेरो वरिपरि लाग्छन र सोध्छन दाइ काठमाडौं हो भने हाम्रोमा जाउ है, सिट खाली छ, हामी मिलाएर टिकट काटिदीन्छौ आउनुहोस भनेर करिब ५/७ जना नै आ-आफ्नो स्वरमा बोलीरहेको हुन्छन । तिनीहरुको बोलीको वास्ता नगरी म राप्ती यातायातको काउन्टरमा छिरे र काउन्टरमा कति कति सिट छ भनेर सोध्दा प्राय सीट सबै रिजर्ब भैसकेको रहेछ । अर्को काउन्टर जुन अम्विकेश्वरी यातायातमा पनि सिट खाली रहेनछ ।
एक जना गाडी स्टाप मेरो नजीकै आएर ‘म तपाइलाई गाडी स्टापको सिट मिलाइदिन्छु’ भने पछि म सहारा यातायात प्रालिको काउन्टर पुगे र बेलुका ५ बजेको लागी B को १,२ नंम्बर सिटको टिकट काटे । तुल्सीपुर डिलक्समा एक जना मेरै साथीले त्यही समयको लागी टिकट काटेको रहेछ मैले उसलाई भने जाउ सौचालय भएको गाडीमा तर उसले पहिले नै टिकट लिईसकेको रहेछ ।
मैले सोचेको थिए सहारा यातायतमा त खाना,पानी, बसमा मज्जाले नेट चलाउनको लागी वाईफाई फ्री, सुन्न र हेर्नको लागी अडियो भिडियोको व्याबस्था, चिसो, तातो जुन आबश्यक पर्छ, त्यसैको व्यबस्था साथै सौचालय सहितको गाडीको व्यवस्था छ ।
प्राय दाङमा काठमाडौंको लागी सन्चालन आएका गाडिहरुमा खाना, पानी, वाईफाई फ्री, सुन्न र हेर्नको लागी अडियो भिडियोको व्यवस्था, हिटर र कुलर को व्यस्था त सबै डिलक्स गाडीहरुमा छ भन्ने नै गछर्न तर सहारा यातायातमा थप सुविधा शौचालय सहितको आएको छ भन्ने हल्ला थियो । तर मैले त्यो शौचालय देखिन । मैले टिकट काटेको गाडिमा शौचालय हटाइ सकेको रहेछ अनि मैले चालकलाई प्रश्न गरे दाई किन सौचालय हटाएको ? चालकको जवाफ आउछ शौचालयले करिब ५ जना जतिको सिटको ठाउ ओगटछ । यदि एक टिम मात्रै हिसा गर्ने हो भने पनि हामीलाइ ६००० रुपैया घाटा लाग्छ, अनि शौचालय सहितको गाडी चलाउन पनि उपयुक्त सडक छैन ।
घोराही नजिकै आइपुग्दा मैले सहचालक लाई मेरोमा वाइफाइ कनेक्ट गर्दिनु भन्दा सहचालकको जवाफ वाइफाईले काम गरेको छैन भन्ने आयो । पुन: मैले प्रश्न गरे टिकट काट्दा त सबै सेवा छ भनेको अहिले काम गर्दैन भन्नुहुन्छ ? भन्दा चुपलागेर बसीरहे ।
करिब राती १० बजे तिर गोरुसिंगेमा खानाखाना गाडी रोकीयो । रातको समयमा चिसोले एकदम सताइरहेको थियो, अनि अर्को गाडी स्टाफलाई सोधे, ‘दाइ अब त हिटर लगाउनु पर्छ है’ मैले भनिनसक्दै स्टाफबाट उत्तर आइसक्छ हिटर भको भए त पहिले नै खालीदिने थिए बिर्गीएको थियो अनि मर्मतको लागी छोर्देको अझै बनेको छैन रे भनेर उत्तर आयो अनि म आफुलाई नै लजित भएको जस्तो महसुश गरे ।
शौचालय भएको गाडी रोजीयो शौचालय नै हटाइसके छ , वाइफाई वाला गाडी रोजीयो वाईफाई नै कनेक्ट हुदैनरहेछ । हिटर वाला गाडी रोजियो हिटर मर्मतको लागी पसलमा छ, अनि सेवा सुविधा भनेको गाडीको सिटमा बसेर काठमाडौ पुग्नुमात्रै हो ? नाम मात्रै एसी र डिलक्स ।
किन फुर्ती दिने अनेकौ सुविधा हाम्रो प्रालिमा छ भनेर सहारा मात्र हैन दाङमा कुनै यातायातले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको सेवा दिन नसकिरहेको कुरा प्रस्टै छ ।